Amnesty: Denying 'abducted' Zim doctor travel for medical treatment cruel
JOHANNESBURG - Zimbabwe authorities have denied travel the to doctor, who was "abducted" by unknown men and released days later.
In response to the authorities’ failure to allow Dr. Peter Magombeyi to travel to South Africa to seek medical attention following his abduction and the deterioration of his health, Muleya Mwananyanda, Amnesty International’s Deputy Regional Director for Southern Africa said: “Not allowing Dr. Magombeyi to travel to seek medical treatment outside Zimbabwe is a cruel denial that puts his health at risk.
Dr. Magombeyi is the acting president of the Zimbabwe Hospital Doctors Association (ZHDA).
He was abducted on the night of 14 September from his house by three armed men suspected to be state agents and released after five days.
He has been instrumental in fighting for the human rights and improved working conditions of Zimbabwean doctors, including leading recent wage increase talks which collapsed, leading to an imminent strike.
Riot police were deployed in Harare on Tuesday September to prevent Dr. Magombeyi from leaving the country in defiance of a High Court order that allowed him to go and seek medical assistance out of the country.